You maraworị ụlọ nkwari akụ?, Netwọkụ mmekọrịta maka ozi ọdịyo | Gam akporosis
Anyị na-aga n'ihu na-ahụ otú ọ fọrọ nke nta kwa izu, n'ihi ọnọdụ nke ụdị dị iche iche, dị iche iche ngwa si na-esi na kpokọtara gaa n'elu na agbanyeghị. Anyị na-ekwu maka ya Clubhouse. Anyị enwewo ike ịhụ n'ụzọ doro anya, n'ihi mgbasa ozi WhatsApp na iwu nchekwa data, ọtụtụ puku ndị ọrụ gbabara na Ngwa ndị ọzọ. Dịka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe enwere nsogbu na WhatsApp, telegram ọ bụ nnukwu uru. Ma n'oge a, signal ọ jisiri ike "kpụ" ezigbo ọnụ ọgụgụ dị puku puku ndị ọrụ.
Ngwa nwughari, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ha na-agbalị, inwe ike ịpụ apụ n’etiti asọmpi dị ukwuu. Netwọk mmekọrịta abụghị onye ọbịa na ụdị mmegharị a. Ugbu a, Gracias nye ndị a ma ama nke ụwa teknụzụ, ọkachasị n'okwu a nke enigmatic Ilọn Musk, Houselọ klọb ewerewo nnukwu ọsọ na ewu ewu. Mana ọbụlagodi na ị na-arahụ maka ịbanye na netwọkụ mmekọrịta ọhụrụ a, ị gaghị enwe ike isonye na klọb na-enweghị ọkpụkpọ oku site na onye ọrụ nọ n'ọrụ.
Nwere ike iji klọb naanị ma ọ bụrụ na onye ọrụ kpọọ gị
Nke a bụ otu n'ime isi ya agaghị emeli, na na n'oge ọ na-adabara iOS. Ma lee ya anya site na azụmaahịa azụmahịa, nke a na-eme Clubhouse na-ewere ụfọdụ ihe omimi y ngwa ngwa ibu ihe ochicho site na ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe na eme ọbụna na-adọrọ mmasị karị mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-egosi n'ihu ọha. O yikarịrị ka mgbe mgbasa ozi mgbasa ozi dị mma, dị ka nke ụlọ klọb chọtara site na ezigbo Musk, ha ga-agbasawanye ohere nke nnweta ka ha wee nwee ike ịlụ ọgụ na ọgụ a dị egwu. Ndị ọrụ dị ugbu a na-ahụ ka ịkpọ oku ha si bụrụ nke bara uru na karịa.
Ọtụtụ na-eche Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na klọb nke ndị ọzọ enweghị. Azịza ya dị mfe, ọ dịghị ihe. Ihe bụ ihe ọzọ, Clubhouse nwere ole na ole nhọrọ karịa ndị ọzọ nke na-elekọta mmadụ media ma ọ bụ ozi ngwa. N'ezie naanị nwere otu ụdị mbipụta nke n'otu oge na-eje ozi iji kwurịta okwu n'etiti ndị ọrụ: ndetu olu. Yabụ ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ihe dị iche, Clubhouse bụ. Enweghị foto nwere otu nde nzacha, enweghị ederede nkebi ahịrịokwu miri emi, ọ dịghịkwa vidiyo, naanị ihe ederede. Echiche nke ịbanye na klọb ahụ ọ masịrị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » You maraworị ụlọ nkwari akụ?, Netwọkụ mmekọrịta nke ozi ọdịyo
Ndị ọrụ gam akporo nwere olile anya na ị ga-esonyere anyị n'oge na-adịghị anya!